Wararkii ugu dambeeyey shaqaalaha ajanabiga ah ee Gaalkacyo lagu qafaashay – SBC
Wararkii ugu dambeeyey shaqaalaha ajanabiga ah ee Gaalkacyo lagu qafaashay
Waxaa soo baxaysa faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta afduubka shaqaale ajanabi ah oo ka tirsaa hay’adda Danish Demining Group oo ka shaqeysa wax ka qabashada arimaha hubka, waxyaabaha qarxa, miino saarita iyo arimaha la xiriira waxyeelada dagaalada.
Shaqaalaha la afduubay ayaa u kala ah nin Denmark u dhashay oo 60 sano jir ah, haweenay Mareykanka u dhalatey oo 30 sano jir ah iyo nin Soomaali ah oo turjubaan ahaan ula shaqeynayey.
Hay’adda DDG oo xaqiijisay afduubka
Klaus Ljoerring Pedersen oo ah madaxda Geeska Afrika ee hay’adda ay ka tirsan yihiin shaqaalaha ee DDG ayaa xaqiijiyey in sadex ka mid ah shaqaalahooda la qafaashay.
“Sadex ka mid ah shaqaalaheena ayaa la qafaashay, mid waa Soomaali, laba waa shaqaale caalami oo kala ah Haweenay Mareykan ah iyo nin Danish (Denmark) ah, waxaana haatan socda baaritaanka arinkan la xiriira” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Pederson.
Shaqaalaha la qafaashay ee ajanabiga ah ayaa ku sugnaa magaalada Gaalkacyo tan iyo sanadkii 2007-dii waxaana ay si isku mid ah ula shaqeynayey maamulada Puntland & Galmudug ee ka kala arimiya Waqooyiga & Koonfurta magaalada Gaalkacy.
Qof codsadey inaan magaciisa la sheegay sababo uu ku macneeyey amaankiisa ayaa sheegay in shaqaalahan lagu afduubtey dhanka Koonfurta magaalada Gaalkacyo ee hoos taga maamulka Galmudug halkaasi oo uu ku yiil xafiiska hay’ada.
Warar ayaa sheegaya in shaqaalaha la qafaashay xili ay ka yimaadeen garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo, iyagoo ku socdey xafiiskooda, waxaana afduubku uu dhacay galabinimadii xiliga bariga Afrika abaara 3-dii galabnimo.
Maamulka Galmudug oo ka hadley afduubka
Maamulka Galmudug masuuliyiin ka tirsan ayaa iyaguna ka hadley falkan afduubka ee ka dhacay deegaanada ay ka taliyaan, iyadoo afduubkan uu noqonayo kii ugu horeeyey ee caynkiisa ah ee ka dhaca deegaanada maamulka Galmudug, iyagoo sheegay inay ku hawlan yihiin sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen dableyda afduunkaasi geystey, aynaa soo badbaadin doonaan la haystayaasha.
“Waxaynu ciidamo u dirnay dhamaan wadooyinka ayna xiraan, si aynu u joojino kooxda dadka qafaalatey” ayuu yiri Axmed Maxamuud oo ah wasiir kuxigeenka amniga Galmudug.
Afduubka oo ay ku lug leeyihiin ilaaladii ajaanibta
Warar aynu ka helnay ilo wareed oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dableyda afduubka geystey ay ula baxsadeen la haystayaasha dhanka wadada Gaalkacyo uga baxda degmada Hobyo halkaasi oo ay ku xoogan yihiin kooxaha burcad badeeda.
Sidoo kale dad aynu la xiriirnay oo ka gaabsadey in magacooda la xuso sababo xasaasiyada warkani uu leeyahay ayaa sheegay in afduubka shaqaalahan samafalka ay ku lug leeyihiin kooxdii ilaalada u aheyd.
Mareykanka oo ka hadley afduubkan
Waaxda arimaha dibada Mareykanka war ay ka soo saartey magaalada Washington waxay ku sheegtey in ay wadaan xiriiro kala duwan oo afduubkan la xiriira sidii ay uga heli lahaayeen xog dheeraad ah loona xaqiijin lahaa amaanka dadka la qafaashay.
“Waxaan sugaynaa oo aynu aad u eegaynaa amaanka shakhsiyaadka, waxaana si wanaagsan ula xiriiraynaa xiriiro Kenya & Soomaali ah si aynu helno faahfaahin dheeraad ah” ayaa lagu yiri hadalka ka soo baxay waaxda amuuraha dibada Mareykanka.
Hay’adda DDG ayaa ka hawlgasha 10 wadan oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Afgaanistaan, Koonfurta Suudaan, Colombia, Iraq, Sudan, Ugandha, Zimbabwe, & Sri Lanka sidoo kale waxay ka hawlgashaa deegaanada la baxay Somaliland.
Hay’adda Danish Demining Group waxay hoos tagtaa hay’ada Danish Refugee Council ee laga leeyahay wadanka Denmark.